सचिवालयमा टरेको ओलीको राजीनामाको खड्को स्थायी कमिटीमा पुनः ब्युँतिने !
शनिवारको सचिवालय बैठकपछि सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)भित्रको आन्तरिक विवाद साम्य भएको मानिएपनि विवादको ‘पराकम्प’ले नयाँ–नयाँ संशय सिर्जना गरिरहेका छन् ।
प्रधानमन्त्री तथा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले फ्याँकेको ‘चारो’मा नफस्ने सहमति गरेर अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, वरिष्ठ नेताद्वय झलनाथ खनाल र माधवकुमार नेपाल अनि उपाध्यक्ष वामदेव गौतम शनिवारको सचिवालय बैठकमा प्रवेश गरेका थिए ।
बैठकमा ‘राजानीमा’ भन्ने शब्द उच्चारण नै भएन । त्यसअघि बुधवारको सचिवालय बैठकमा भने अध्यक्ष प्रचण्डले ‘म भए राजीनामा दिन्थें’ भन्ने खालको घुमाउरो वाक्यांश प्रयोग गरेर प्रधानमन्त्रीको राजीनामा मागेका थिए ।
चारै नेताहरू ओलीको राजीनामाबाट पछि नहट्ने आंकलन भइरहेका बेला नेकपाको विवाद भने ओलीको राजीनामा नै नमागी ‘नाटकीय’ ढंगले साम्य भएको हो ।
ओलीले उपाध्यक्ष गौतमलाई प्रधानमन्त्री बन्ने प्रस्ताव गरेपछि विवाद अझ बढेको थियो । यद्यपि शनिवारको बैठकले ‘उपयुक्त समय’मा उनलाई प्रतिनिधि सभाको उम्मेदवार बनाउने निर्णय भने गरेको छ ।
सचिवालय बैठकमा ओली लगायतका नेताहरूले आत्मालोचना गरेपछि विवाद साम्य भएको भनेर मान्न नेपाल पक्षीय नेताहरू तयार छैनन् ।
आइतवार नेता नेपालसँग उनीनिकट केही स्थायी कमिटी सदस्यहरूले ‘सहमति कसरी भएको हो ? प्रचण्डको भूमिका के हो ?’ भनेर प्रश्न गरेका थिए ।
उसो त शुक्रवार साँझ तिनै नेताहरूले प्रचण्डलाई ओलीसामु नझुक्न दबाब पनि दिएका थिए । प्रचण्डले अघिल्लो दिन नेपाल समूहका स्थायी कमिटीलाई आश्वस्त पारे तर भोलिपल्टको बैठकमा ओलीसँग चोचोमोचो (नेता नेपालको शब्दमा) मिलाएको आरोप लागेको थियो ।
आइतवारको कोटेश्वर भेलामा प्रचण्डको भूमिकाप्रति नेताहरूले संशय व्यक्त गरे । स्थायी कमिटी सदस्य रघुजी पन्तले प्रचण्डको भूमिकाको बारेमा प्रश्न उठेको स्वीकार गरे ।
‘धेरै साथीहरूले यस्तो प्रश्न गर्नुभयो तर वरिष्ठ नेता नेपालले भने त्यस्तो होइन भनेर हामीलाई आश्वस्त तुल्याउन खोज्नुभएको थियो,’ पन्तले लोकान्तरसँग भने ।
पछिल्लो समय प्रचण्ड ओलीसँग मिलेर नेता नेपाललाई पुनः ‘कर्नर’मा पुर्‍याउन खोजेको त होइन भन्दै नेपालसमूहका नेताहरूले प्रश्न गर्न थालेका छन् ।
पार्टी एकीकरणपछि देखिएका धेरै विवाद प्रचण्ड ओलीतिर मिलेपछि मात्र समाधान भएका उदाहरणहरू नेकपाभित्र प्रशस्तै छन् ।
‘जताततै लपक्कै हुने प्रचण्डको स्वाभाव हामीले पहिल्यैदेखि बुझेका हौँ,’ नेपाल समूहका एक नेताले लोकान्तरसँग भने, ‘सरकारको अराजकता, प्रधानमन्त्रीको एकलौटी र स्वेच्छाचारिताविरुद्ध मिलेर संघर्ष गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका नेताहरूले नै यसरी क्याम्प चेञ्ज गर्दै हिँडेपछि पार्टी कसरी उँभो लाग्छ ?’
उनले सचिवालयमा नेताहरूले राजीनामा माग्न डराएपनि स्थायी कमिटीमा भने राजीनामा मागिने बताए ।
नेकपामा त्रीपक्षीय शक्ति सन्तुलन छ । ओली, प्रचण्ड र नेपालका छुट्टाछुट्टै समूहहरू छन् । तीमध्ये दुईजना जतातिर हुन्छन्, त्यतैतिर नेकपा ढल्कने गरेको इतिहास छ । पार्टीका कुनै पनि कमिटीमा तीनमध्ये कुनै एकजनाको बहुमत छैन ।
आइतवार नेता नेपालले आफ्ना समूहका स्थायी कमिटी सदस्यहरूलाई ‘पावर सेयरिङ’ गरेर अघि बढ्ने सहमति भएको जानकारी गराए ।
पार्टीको विवाद समाधान गरेर अघि जानुको विकल्प नभएकाले सहमतिमै सबै नेताहरू एक कदम पछाडि हटेको भन्दै नेता नेपालले आफूनिकट नेताहरूलाई आश्वस्त पार्न खोजेपनि सबै नेताहरू प्रचण्डसँग विश्वस्त भइसकेका छैनन् ।
तर आफ्ना समूहका स्थायी कमिटी सदस्यहरूसँग भेट्नुअघि नेता नेपाल प्रचण्डसँग भेट गरेका थिए । दुवैबीच भैंसेपाटी गठबन्धनलाई कायमै राखेर अघि बढ्ने सहमति भएको स्रोत बताउँछ ।
तत्कालका लागि पार्टी विवादको वैकल्पिक समाधान नभएकाले सचिवालयमा प्रधानमन्त्रीको राजीनामा नमागिएको विषयमा दुवै नेताहरू स्पष्ट देखिन्छन् । प्रचण्डसँग भेटेपछि नेता नेपालले कोटेश्वरमा आफूनिकट नेताहरूलाई बोलाएका थिए ।
शनिवारको सचिवालय बैठकले २५ गते स्थायी कमिटी बैठक बोलाउने निर्णय गरेको थियो । स्थायी कमिटीमा प्रस्तुत गर्नेगरी प्रचण्ड दस्तावेज निर्माणको प्रक्रियामा अघि बढिसकेका छन् । प्रचण्डले नेता नेपालले उठाएको एक व्यक्ति, एक जिम्मेवारीको मागलाई दस्तावेजमै उल्लेख गर्ने आश्वासन दिएको स्रोतको दाबी छ ।
स्थायी कमिटी बैठकमा आउला त राजीनामाको माग ?
नेता नेपालनिकट स्थायी कमिटी सदस्य अष्टलक्ष्मी शाक्यले स्थायी कमिटीमा ओलीको राजीनामा माग्ने तयारी रहेको संकेत गरेकी छन् ।
लोकान्तरसँगको कुराकानीमा उनले भनिन्, ‘विषयवस्तुहरू अलि उपलब्धिमूलक होस् भनेर हामीले तयारी गरिरहेका छौं । सबै कुरा बैठकमै हुन्छ । राजीनामादेखि लिएर विधि, विधान र पद्धतिका कुराहरू बैठकमा स्वाभाविक ढंगले उठ्छन् । कसरी उठाउने भन्ने हामीले तयारी गर्दैछौं ।’
स्थायी कमिटी बैठकमा राजीनामा लगायत धेरै कुराहरू उठ्ने प्रचण्डनिकट मानिने स्थायी कमिटी सदस्य हरिबोल गजुरेलले पनि बताइसकेका छन् । ‘मुख्य कुरा प्रधानमन्त्रीले जवाफ दिनुपर्छ । उहाँको जवाफ चित्तबुझ्दो नभए प्रश्नहरू त उठिरहन्छन्,’ गजुरेलले भने, ‘राजीनामा मात्र होइन, बैठकमा धेरै कुराहरू उठ्नेवाला छन् । केही कुराहरू पहिलेकै बैठकहरूमा पनि उठेका थिए ।’
यद्यपि स्थायी कमिटी बैठक बस्नु एकदिन अघि सचिवालय बैठक पुनः बस्नेछ । सोही सचिवालय बैठकमा स्थायी कमिटी बैठकको एजेन्डाका बारेमा छलफल हुनेछन् । प्रचण्डले तयार गरेको दस्तावेजसमेत सचिवालयमा छलफल गरेर अघि बढाउने तयारी नेताहरूको छ ।
गत माघको दोस्रो सातामा बसेको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा ओली र प्रचण्डबीच पार्टी एकताको एउटै सन्देश दिने सहमति भएको थियो । दुई नेताबाट फरक–फरक कुरा आउँदा जम्बो केन्द्रीय कमिटीमा गलत सन्देश जानेमा दुवै सजग थिए ।
‘अब बस्ने भनिएको स्थायी कमिटी बैठकमा पनि सबै शीर्ष नेताहरू एक भएर प्रस्तुत हुनुहुनेछ,’ ओलीनिकट एक नेताले भने ।
अप्ठेरोको निकास : ओली-प्रचण्डबीच सहमति
यसअघि पार्टी एकीकरणका धेरै प्रक्रियाहरू ओली र प्रचण्ड एकमत भएपछि मात्र पूरा भएका थिए । अझै पनि पार्टी एकताले पूर्ण रूप लिइसकेको छैन । यस्तो अवस्थामा प्रचण्ड ओलीसँग मिलेर अघि बढेनन् भने नेकपाभित्र दोषको भारि प्रचण्डले नै लिनुपर्ने हुन्छ ।
नेकपाभित्र त्रीपक्षीय शक्तिसन्तुलन भएपनि कतिपय निर्णयहरू ओली र प्रचण्डको तजबिजीमा हुने गरेका थिए । नेता नेपालले चाहेका विषयमा छलफल नभएपछि एकाधपटक सचिवालयको निर्णयविरुद्ध फरक मतसमेत राखिसकेका छन् । तर अहिलेसम्म ओली र प्रचण्डले फरक मत राखेका छैनन् ।
प्रधानमन्त्री ओलीको राजीनामा माग्ने पक्ष र निरन्तरता दिनेपक्षका सांसदहरू बीच हस्ताक्षरको प्रक्रिया अघि बढिसकेको अवस्थाले पार्टी सहजै फुट्ने संघारमा थियो । यस्तो बेलामा ओलीसँग सहमति गरेरै अघि बढ्ने प्रचण्डको कदमले पार्टीलाई एकजुट बनाउन मद्दत गरेको छ ।
नेता नेपालको आग्रहअनुसार मुख्यमन्त्री र संघीय सरकारका केही मन्त्री हेरफेर गरेर अघि बढ्न ओली पनि तयार भएका छन् ।
यसको छनक आइतवार प्रचण्डले नेता नेपाललाई दिएका थिए । नेता नेपाल केही लिएर चुपचाप बस्नुपर्ने स्थितिमा देखिन्छन् ।
‘सचिवालय बैठकमा एकाध प्रदेशको मुख्यमन्त्री र संघीय मन्त्रिपरिषद् हेरफेर गर्ने विषयमा छलफल भएको होइन,’ एक सचिवालय सदस्यले भने, ‘यो नेताहरूबीचको अन्डरस्ट्यान्डिङ हो र त्यो हुने सम्भावना छ । पार्टीभित्र एक व्यक्ति एक पदको माग उठेको धेरै पहिलादेखि हो । यसको टुंगो पनि स्थायी कमिटी बैठकले नै लगाउनेछ ।’
कसलाई मन्त्री बनाउने: सिंहदरबारमा झण्डा मात्र हल्लाउ...
कुलमान घिसिङले छाडेपछि बिजुली जानु संयोग मात्र ह...